कांग्रेसमा गैरनागरिक हावी बन्दै - Jhilko
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको मुख्य भ्रातृ संगठन नेपाल तरुण दलको म्याद केन्द्रीय समिति नै गठन हुन नपाई सकिएको छ । २०७३ मंसीर ३ गते पोखरामा सम्पन्न चौथो महाधिबेशनद्वारा तरुणदलका चार जना पदाधिकारी चयन गरिएको थियो । ती चार पदाधिकारी पनि निर्वाचनको सट्टा पार्टीका शीर्ष नेताहरुले टीका लगाएर चयन गरेका थिए । बाँकी ९१ जना केन्द्रीय सदस्य छिटै नै सहमतिको माध्यमद्वारा चयन गरिने भनिएको थियो । केन्द्रीय सदस्य चयन नै नगरी तीन वर्षको म्याद सकिएको छ ।
विधानतः महाधिवेशन प्रयोजनका लागि छ महिना म्याद थप्ने अधिकार केन्द्रीय समितिलाई छ । यही अधिकारको प्रयोग गरी छ महिना म्याद थपेर यही अवधिभित्र महाधिबेशनको मिति तय गर्ने रणनीतिमा अध्यक्ष जीतजंग बस्नेत छन् । यसका लागि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्ने तयारीमा उनी छन् । अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव र कोषाध्यक्ष गरी चार जना पदाधिकारी भित्रै पनि ठूलो विवाद छ ।
वरिष्ठ नेता पौडेल पक्षबाट महासचिव बनेका भुपेन्द्रजंग शाहीलाई दलको साधारण सदस्यबाट समेत निस्काशन गरेको सूचना अध्यक्ष बस्नेतले जारी गरिसकेका छन् भने देउवा पक्षबाट अध्यक्ष बनेका बस्नेतलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निस्कासन गरेको सूचना महासचिव शाहीले जारी गरिसेकेका छन् । गत दशैं अघि नै उनीहरुले यो सूचना जारी गरेका हुन् । यतिबेला चार पदाधिकारीमध्ये शाही एक ठाउँमा छन् भने अध्यक्ष बस्नेत, सिटौला समुहद्वारा उपाध्यक्ष बनेका उत्तम चापागाइँ र बालकृष्ण खाणको कोटाबाट कोषाध्यक्ष बनेका विद्वान गुरुङ अर्को ठाउँमा छन् । गत कात्तिक १० गते दलको स्थापना दिवसका अवसरमा चियापान समारोहको आयोजना महासचिव शाहीले छुट्टै गरेका थिए ।
एकातिर विभाजन आउनु र अर्कातिर म्याद सकिनुले तरुणदल संकटमा परेको छ । नेपाली कांग्रेसका भातृ संस्थामध्ये तरुणदललाई लडाकु दस्ताका रुपमा लिने गरिएको छ । जसको आफ्नै निलो बर्दी हुन्छ । यसैगरी बर्दी नलगाएको अर्को भ्रातृ संस्था नेवि संघको म्याद २०७५ भदौमा सकिएको थियो ।
दुई पटक म्याद थप्दा पनि महाधिबेशन हुन नसकेपछि गत माघदेखि नेवि संघ विघटन भएको छ अर्थात केन्द्रीय समिति विहीन बनेको छ । यसैगरी हरेक तीन वर्षमा हनु पर्ने नेपाल दलित संघको महाधिबेशन नभएको सात वर्ष पुगेको छ । हरेक तीन वर्षमा महाधिबेशन हुनुपर्ने नेपाल प्रेस युनियनको महाधिबेशन नभएको पाँच वर्ष पुगेको छ । नेपाल महिला संघको हालत पनि यस्तै छ ।
नेपाली कांग्रेसको पार्टी संगठन कसरी तदर्थवादमै अघि बढेको छ ? भन्ने समाचार त मिडियामा छरपष्ट भइरहेका छन् । विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिहरुको पनि हालत यस्तै छ । नेपाली नागरिकता त्यागेर अमेरिकी नागरिकता लिएका आनन्द विष्टलाई सभापति शेरबहादुर देउवाले आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य बनाएपछि बिवाद चुलिँदो छ । जो पर्यटकका रुपमा नेपाल आउँछन्, जसको मतदाता नामावलीमा नाम समेत छैन, उसलाई पार्टीको आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य बनाउनु विधान विपरीत रहेको कुरा पटकपटक उठे पनि सभापति देउवाले वास्ता गरेका छैनन् ।
नेपाली कांग्रेसको विधान अनुसार क्रियाशील सदस्य बन्न नेपाली नागरिक हुनैपर्छ । तर, नेपाली कांग्रेसका तीन हजार दुई सय महाधिबेशन प्रतिनिधिमध्ये करिव तीन सय जना गैरनेपाली नागरिक छन् । विधानतः उनीहरु केन्द्रीय समितिमा उमेदवार बन्न पाउँदैनन् तर मतदान गर्न भने पाउँछन् । विदेशीहरुले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व चयन गर्दा भोलि भयावह अवस्था उत्पन्न हुने त होइन ? भन्ने प्रश्न एकातिर उठेको छ भने अर्कातिर विधानले नै केन्द्रीय सदस्य हुन अयोग्य भनेर किटान गरेका व्यक्तिहरुलाई सभापति देउवाले आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य बनाएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसभित्र यतिबेला बेल्जियम प्रकरण निकै चर्चामा छ । जुन बेला चन्द्र भण्डारी देउवा क्याम्पमा थिए त्यतिबेला उनले डा. आरजु राणालाई कन्भिन्स गरी बेल्जियमस्थित जनसम्पर्क समितिको अध्यक्ष पदमा जवर्जस्ती सीता सापकोटा घिमिरेलाई चयन गरे ।
तर, अध्यक्ष बन्नासाथ उनले खुलेरै कोइराला पक्षको वकालत गर्न थालिन । कोइराला पक्षकी सापकोटालाई चन्द्र भण्डारीले ठूलो तागत प्रयोग गरी अध्यक्ष बनाउनुको कारणबारे आरजु राणाले छानविन सुरु गरिन । छानविनपछि चन्द्र भण्डारीले आफ्नी विवाहित श्रीमतीसँग डिभोर्स गरिसकेको र डिभोर्स गर्नुको कारण समेत आरजु राणाले पत्ता लगाएको बताइन्छ । सीता सापकोटासँग हिमचिम बढेको थाहा पाएपछि चन्द्र भण्डारीकी श्रीमतीले डिभोर्स गरेको कांग्रेसीवृत्तमा चर्चा छ । एनपी साउदमार्फत् यो रहस्य पार्टीमा खुलेको र भण्डारीलाई आरजु राणाले आफ्नो क्याम्पबाट निस्कासन गरेको देउवा निकट एक नेताले नाम नबताउने शर्तमा बताए ।
साथै आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य किरण पौडेललाई बेल्जियम पठाएर आरजु राणाले सीता सापकोटालाई अध्यक्ष पदबाट निस्कासित गरी अर्को अध्यक्ष बनाइ सकेकी छिन् । तर, आरजुको यो कदम अबैधानिक भएको भन्दै पौडेल पक्षले आपत्ति जनाएको छ । बेल्जियममा यतिबेला नेपाली कांग्रेसका जनसम्पर्क समिति दुई वटा छन् ।
डोनाल्ड ट्रम्पले विश्वलाई मन्दीमा फसाउने आशंका
मेक्सिकोका सामानलाई अमेरिका प्रवेशमा अतिरिक्त भन्सार शुल्क ५ प्रतिशत देखि २५ प्रतिशतसम्म...
कोरोनाको कारण इटालीमा एक तिहाई जनसंख्या अलग
इटालीमा कोविड–१९ कै कारण झण्डै २३० जनाको मृत्यु भइसकेको छ । चीन बाहिर यति ठूलो संख्यामा...
अमेरिका र इरानले एक अर्काको सेनालाई आतंकवादी घोषणा गरे
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले इरानको रिभोलुशनरी गार्ड कोप्र्स (आईआरजीसी)लाई...